हर्नियाको उपचारका लागि निकै उपयोगी हुन्छ यो फल, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
हर्निया विशेष गरेर त्यो समयमा हुन्छ, जब पेरिटोनियम (जुन मांशपेशीबाट बन्छ) मा कमजोरी आयो भने हर्निया हुन्छ। जसका कारण पेटको भित्रि भागमा आफ्नो नियमित स्थानमा रहँदैन र फुल्छ । त्यही स्थितिलाई हर्निया भनिन्छ।
कस्ता–कस्ता हुन्छन् हर्निया ?
यस प्रकारको हर्नियामा पेटको सर्जरी हुने भागमा धेरै भार पर्नाले मांसपेशीहरु अत्यधिक तन्कन्छ, जसका कारण त्यो भाग फुल्छ।
इन्गुनल हर्नियामा आन्द्रा अथवा मुत्राशय पेट भित्रबाटै फुल्छ अथवा पेट र तिर्घाको बीचको भाग इन्गुइनल नलीमा हुन्छ । यो विशेष गरेर त्यो भागमा भएको कमजोरीका कारण हुन्छ।
महिलाहरुमा प्रायः पेटको हर्निया धेरै हुन्छ, किनभने गर्भवतीको क्रममा महिलाहरुको इन्टेरियर एब्डोमिनल वाल मसल्स तन्कन्छ। सर्जरी भएको ठाउँमा सबैभन्दा धेरै हर्निया विकसित हुने सम्भावना हुन्छ, किनभने त्यो ठाउँ सबैभन्दा धेरै तन्किएको हुन्छ । महिलाहरुमा हर्निया हुने मुख्य कारण मोटोपन हो ।
सर्जरी गरेको ५–६ दिनपछि विस्तारै हिंड्न शुरु गर्नु पर्छ, जसले गर्दा खुट्टामा रगत जम्न पाउँदैन र रक्त सन्चार पनि राम्रो हुन्छ ।
–भारी सामान उठाउनु हुदैन ।
–नियमित जाच गराइराख्नु पर्छ ।
–स्वस्थ्य भोजन खानुको साथसाथै पानी पर्याप्त मात्रामा खानु पर्छ।
हर्नियाको आयुर्वेदिक उपचार
चर्चित भारतीय आयुर्वेदिक डाक्टर अबरार मुल्तानीका अनुसार हर्नियाको लक्षण पहिचान गरेर सुरुवातामै उपचार गर्न सक्यो भने यो निको हुन्छ। उनका अनुसार आयुर्वेदमा बर्रोलाई हर्नियाको उपचारका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ। यसको प्रयोग सामान्य अर्थात सुरुवाती लक्षण देखिनासाथ गर्न सकिन्छ। सुरुवातमै यसको प्रयोग गर्न सके अप्रेशन बिनानै यसलाई ठिक पार्न सकिन्छ।
बर्रोलाई त्रिफलाको एक अंग मानिन्छ। यसको बोक्रा निकाल्नुहोस् र पाउडर बनाउनुहोस्। त्यसपछि यस पाउडरमा जामुनको सिरका मिलाएर हनिर्या भएको भागमा लगाउनुहोस् । यो लेपलाई एक देखि डेढ घण्टासम्म त्यसै छोडिदिनुहोस् ।
ध्यान दिनुहोस् की आयुर्वेदिक यो उपाय गम्भिर हर्नियाका लागि भने गर्न हुँदैन्। सुरुवाती लक्षण देखिदा मात्र यसको प्रयोगले ठिक पार्न सकिन्छ। यदी जटिल किसिमको हर्निया देखियो भने यसको प्रयोग उपयोगी हुँदैन्। यसको प्रयोग गर्नुपूर्व तपाईले चिकित्सको सल्लाह पनि लिनु निकै उत्तम मानिन्छ।
शरीर कुनै कुराको लक्षणहरु देखिएता पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्छौं,जसले भविष्यमा गम्भीर स्थिति उत्पन्न गर्छ। त्यसैले यदि तपाईंले त्यस्ता लक्षणहरु देख्नु भयो भने तुरुन्त डाक्टरसंग भेट्नु पर्छ। जसले गर्दा समयमा नै उपचार हुन्छ।
खोक्दा, हाछ्यँ गर्दा अथवा सामान उठाउँदा पेटको तल्लो भागमा पीडा महसुस गर्नु हर्नियाका लक्षण हो। त्यस्तै पेटमा भारीपनको महसुस हुनु, बान्ता र कब्जियतको समस्या र सुनिएको ठाउँमा पीडा हुनु पनि यस रोगका लक्षणहरु हुन्। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)